Maythadin – Page 84 – News
May Thadin | May 30, 2021
Unicode အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်နေတဲ့ မီးနိုကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ကာ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ် မီးနိုကတော့ လတ်တလောမှာလည်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လည်း စားသောက်ကုန်တွေအပြင် အဝတ်အထည်နဲ့ အခြားလိုအပ်တာတွေကို ကူညီလှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပါတယ် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် အန္တရာယ်တွေကြားကနေ လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမယ့် အပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လညါး စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြလာပါတယ် ၇ရက်သားသမီး စေတနာရှင်တွေရဲ့
Unicode ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နတ်သမီးလေးလို ချောမောလှပလွန်းလှသည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှကိုးတန်းကျောင်းသူလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ပင်အလွန်ချောမော လှပေပြီးနာမည်ကြီးနေခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးကိုမြင်တွေ့သည့် လူတိုင်းလိုလိုဟာချစ်ခင်မြတ်နိုးမိပြီး သူမ၏ အလှကိုချီးကျူးကြရသူများပင်ဖြစ်သည်။ အချို့ကောင်လေးများဆိုလျှင် ကောင်မလေးကိုမြင်ပြီး အရူးအမူးဖြစ်သွားကာ ကောင်မလေး၏မိဘဆီသွားရောက်ပြီး လက်ထပ်ချင်ကြောင်းပြောဆိုသူများလည်းရှိပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာလည်း အမှန်တကယ်ပင်ကျောင်းယူနီဖောင်းလေးနှင့်တင့်တယ်လှပနေသည်မှာငြင်းဆန်၍မရပေ။ ယခုတွင်လည်း ကောင်မလေးဟာချစ်ခင်နှစ်သက်သူများအပြင် သူမအား လက်ထပ်ချင်သည့်သူအလွန်များပြားနေသောကြောင့် စိတ်ညစ်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi ယခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ နတ္သမီးေလးလို ေခ်ာေမာလွပလြန္းလွသည့္
Unicode မင်း​အောင်လှိုင်(ခ) မ .အ .လ Troll ပြည်တွင်းပြည်ပ ​ခေတ်စားပြီး ထိုင်းနှင့်တရုတ် မီဒီယာများက သတင်း​ဖော်ပြ ရန်ကုန်၊ ​မေ ၃၀ အ .ကြမ်း. ဖက် စ.စ်​.ခေ.ါင်. း​ဆောင် မင်း​အောင်လှိုင်(ခ) မအလ၏ပုံများကို Troll လုပ်ထားသည့် ဓါတ်ပုံများ လူမှုကွန်ရက်တွင် ​ခေတ်စား​နေပြီး ယင်းသို့ ​ခေတ်စား​နေမှုကို
ဒီမော့ဆို စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို စားနပ်ရိက္ခာပို့တဲ့ လူငယ် (၃) ဦး အပြန်လမ်းမှာ ပျောက်ဆုံးနေ
Unicode မေလ (၂၆) ရက်ညနေပိုင်း ဒီမော့ဆို စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို စားနပ်ရိက္ခာပို့ဖို့ စိုင်းလင်းလင်းဦး ကားဖြင့် စိုင်းလင်းလင်းဦး အပါအဝင် မေဇင်ထူး နှင့် နန္ဒာဦးခင်တို့ ဒီးမော့ဆို ထီးပိုးကလိုးပဲ သွားရောက်ပို့ဆောင်ပြီး ညနေ (၅) နာရီဝန်းကျင် လွိုင်ကော်သို့ ပြန်လာရာ အိမ်သို့မရောက်ရှိပဲ ယနေ့ထိ အဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “သတင်းကြားရတော့ စိုင်းလင်းလင်းဦးကို
May Thadin | May 29, 2021
Unicode လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကတော့ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် စစ်ပညာတွေသင်ယူနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့နာမည်က Alfie ဖြစ်ပြီး ဆံပင်ညှပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က Hairstylist တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Alfie က ရန်ကုန်မြို့မှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုပွဲတွေ စတင်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကတည်းက သူကိုယ်တိုင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
Unicode မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို ပြည်သူလူထုက နိုင်ငံတကာသိမြင်အောင်လို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖော်ထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညက ဂျပန်နိုင်ငံ၊Chiba မြို့မှာကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲကို မြန်မာအသင်းက ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲမစခင်မှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းကနိုင်ငံတော်သီချင်းလိုက်မဆိုခဲ့ကြတဲ့အပြင် ဘောလုံးအားကစားသမား ကိုပြည့်လျှံအောင်ကလည်း လက်သုံးချောင်းထောင်ကာ သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းက ဂျပန်အသင်းကို (၁၀)ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာပြည်သူလူထုကတော့ သူတို့ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပြည့်လျှံအောင်ကလည်း ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မျက်နှာပါလာမယ်မှန်းသိတာတောင် လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့လို့ မြန်မာပြည်ပြန်လာရင်သူ့အတွက်မလုံခြုံတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးကတော့ ပြန်ဖို့အဆင်မပြေတော့တဲ့ ကိုပြည့်လျှံအောင်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာရှင်မြန်မာလူမျိုးက မြန်မာအသင်းတစ်ဖွဲ့လုံး မြန်မာ့နွေဦးပါမယ်ဆိုရင်လည်း အားလုံးကို သူ့ရဲ့အိမ်ခေါ်ထားပြီး တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတာကြောင့် နီးစပ်ရာဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ ရဲတပ်သားတွေဆီ အကူအညီတောင်းပြီး သူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ဖုန်းနံပါတ်ပါ တင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ ကိုပြည့်လျှံအောင်အပြင် တစ်ဖွဲ့လုံးကိုပါတာဝန်ယူပေးမယ့်အကြောင်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Crd Zawgyi ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြကို ျပည္သူလူထုက နိုင္ငံတကာသိျမင္ေအာင္လို႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မေန႕ညက ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊Chiba ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ ကမာၻ႔ဖလားေျခစစ္ပြဲကို ျမန္မာအသင္းက ကစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲမစခင္မွာ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ေဘာလုံးအသင္းကနိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းလိုက္မဆိုခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ ေဘာလုံးအားကစားသမား ကိုျပည့္လွ်ံေအာင္ကလည္း လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ကာ သူ႕ရဲ႕ဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအသင္းက ဂ်ပန္အသင္းကို (၁၀)ဂိုးျပတ္နဲ႕ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ရဲစြမ္းသတၱိကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုျပည့္လွ်ံေအာင္ကလည္း ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ သူ႕ရဲ႕မ်က္ႏွာပါလာမယ္မွန္းသိတာေတာင္ လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ခဲ့လို႔ ျမန္မာျပည္ျပန္လာရင္ သူ႕အတြက္မလုံၿခဳံေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးကေတာ့ ျပန္ဖို႔အဆင္မေျပေတာ့တဲ့ ကိုျပည့္လွ်ံေအာင္ကို တတ္နိုင္သေလာက္ကူညီေပးဖို႔စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာရွင္ျမန္မာလူမ်ိဳးက ျမန္မာအသင္းတစ္ဖြဲ႕လုံး ျမန္မာ့ေႏြဦးပါမယ္ဆိုရင္လည္း အားလုံးကို သူ႕ရဲ႕အိမ္ေခၚထားၿပီး တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ လူ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရွိတာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ ရဲတပ္သားေတြဆီ အကူအညီေတာင္းၿပီး သူ႕ကိုဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္ပါတင္ေပးလာတာျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုမ်ိဳး ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႕ မိမိရဲ႕ဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ကိုျပည့္လွ်ံေအာင္အျပင္ တစ္ဖြဲ႕လုံးကိုပါတာဝန္ယူေပးမယ့္အေၾကာင္းေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ Crd
Unicode လက်ရှိအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံတော်တော်များများက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေပြီး စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို ရှုံ့ချကာ ရပ်တန့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားကြတာတွေ့ရသလို နိုင်ငံသီးသီးမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းအရေးတော်ပုံကြီးမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်အားဖြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသားဖြစ်တဲ့ Lee Seung Gi တို့ကလည်း မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ကြောင်း ပြသကာ အားပေးစကားတွေလည်းပြောလာပါတယ် ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် SBS
Unicode လက်ရှိအခြေအနေကြောင့် တချို့လူငယ်လေးတွေကတော့ မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်အိပ်မက်တွေ မပြည့်သေးဘဲ စောစီးစွာကြွေလွင့်သွားခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ကျဆုံးသူတွေထဲမှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့… ကလေးငယ်တွေလည်း ပါဝင်သလိုပညာတတ်လူငယ်လေးတွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။(၃.၃.၂၀၂၁)ရက်နေ့က မန္တလေးမှာ ပြုလုပ်ကြတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ် သူရဲကောင်းမလေး ကြယ်စင် (ခ) Angel (ခ) ကျားရှိ ကတစ်တပ်တစ်အားပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်စင်ကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အရမ်းရဲရင့်လို့လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင် ရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ(၃)ရက်နေ့၊လူထုလှုပ်ရှားမှာတော့ သူရဲကောင်းမလေး ကြယ်စင်ရဲ့ ဦးခေါင်းကိုထိမှန်ပြီး
ဆိုင်ကယ်စစ်ဆေးဖို့ မရပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အနောက်ကနေ စစ်ကားဖြင့် လိုက်တိုက်ခံရကာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရတဲ့ မော်ဒယ် ထက်အောင်
Unicode ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် မနေ့ည ၉ နာရီခွဲ ဝန်းကျင်တွင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအား စစ်ဆေးရန် မရပ်ပေးတာကြောင့် ကားဖြင့်လိုက်တိုက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အရှိန်ကြောင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလုံး ရစရာမရှိဘဲ ထိုကောင်လေးမှာလည်း အခြေအနေမကောင်းရာကနေ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားသူမှာ Mister Global Teen Myanmar 2017 Winner နဲ့ Prince &
Unicode ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီကာလမှာ အားလုံးလိုလို အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာပါနော်။ အချင်းချင်းအခက်အခဲဖြစ်နေတာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်း ရှိကြပါတယ်နော်။ ဒီလိုရှိကြပေမယ့်လည်း နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူကတော့ ရှိကြစမြဲပါပဲနော်။ လူရွှင်တော် ပေါ်လေးရဲ့သား ချစ်စုကတော့ သူ့ဆီက ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံဆယ်သိန်းပြန်မပေးဘဲ ပတ်ရှောင်ပြေးနေတဲ့ လူရွှင်တော် စံလင်းရဲ့အကြောင်းတွေကို ဖွင့်ချလိုက်ပါပြီနော်။ ” လူတိုင်းအဆင်မပြေတာကိုလက်ခံတယ် ငွေဆယ်သိန်းနီးပါး
Newer 1 … 82 83 84 85 86 … 92 Older